China I-RGB yeDynamic yeDVD yePaneli abavelisi kunye nabathengisi Huayuemei
Umba Iphaneli ye-RGB yeDynamic
Ubungakanani be-LED I-SMD5050
I-LED yangaphakathi 64PCS
Amandla 36w / iiPC
1.Xhobisa uphawu lwakho kunye nentengiso
Kwilizwe lanamhlanje elinamandla, uphawu lwakho kunye nentengiso kufuneka zigqame ngobuchule kunye nezinto ezothusayo. Kubalulekile ukuchitha uhlahlo-lwabiwo mali lwakho ngaphandle kokulalanisa kwingcinga kunye nokuvela. Amathuba anikezelwa ziipaneli ze-HYM Dynamic ze-LED azinasiphelo. Ngokutshintsha nje umxholo kunye nokuqaqambisa iinxalenye zokuprinta kwakho, wenza inkangeleko eyahlukileyo kwaye uzive unemifanekiso efanayo.
Enkosi kwibhokisi elula ekhanyayo, uphawu lwakho lume kwindawo ebonakalayo. Yisebenzise kwaye unike amandla ivenkile yakho kunye neempawu zangaphandle zokugcina.
2. Izinto eziluncedo kwiPaneli yeDVD yeDynamic
• Inokucwangciswa ngekhadi lolawulo le-K-8000C nge-DMX512 propotol.
• Ukukhanya okungafaniyo.
• Kulula ukuyifaka kwibhokisi yakho ekhanyayo okanye kwiselfowuni.
Bandakanya abaphulaphuli bakho ngokonwaba kunye namava eBranti ahlukileyo.
• Uyilo lweemodyuli ezilula ukwakha
Utshintsho olulula lokuprinta kunye nokulayisha kwevidiyo oopopayi
3. Ngeebhodi ze-RGB ze-RGB ezicwangcisiweyo, i-RGB inokumiselwa kwimibala eyahlukeneyo ye-16.7 yezigidi .Le nkqubo yokuxabana iyodwa idityaniswe ngokulula kuyilo lwakho lokukhanyisa i-RGB ukunika ukukhanya okufanayo kuyo nayiphi na imibala. I-LED nganye yi-RGB, oku kuthetha ukuba bavelisa umbala oBomvu, oGreen kunye noBlue oya kuthi xa udityanisiwe, wenze nawuphi na umbala kwibala,
4. Ngenxa yoku kuguquguquka kombala kunye nokucwangciswa kwenkqubo, sinokwenza iinkqubo ezintsonkothileyo ze-LED ezibandakanya ukucima / ukucima, ukufiphala nokuqaqamba kunye nokutshintsha kombala okunokuzisa umfanekiso welaphu oprintiweyo ebomini.
I-Dynamic 'lightbox inganyuswa ngodonga, ime simahla ngeenyawo, yakhiwe ngaphakathi okanye yamiswa kwiintambo. Inokucwangciswa ukude nayo, ibhokisi nganye inokunxibelelana nenethiwekhi engenazingcingo yendawo kwaye inkqubo entsha inokuhanjiswa kuyo kwakube kuyilo lwelaphu elitsha.
Egqithileyo Amandla aphezulu e-Edge-lit-LED ekhanyayo
Okulandelayo: Ikhefu leRGB leDynamic ye-LED Strip
Imodyuli yeDynamic Led
Imodyuli eMhlophe eNamandla
Iphaneli yeRgb yeDynamic eKhokelwayo
Ikhefu leRGB leDynamic ye-LED Strip
Ukucwangciswa kwePaneli ye-LED yebhokisi yokukhanya yelaphu